‘रोग र शोक अन्त्य गर्न योग’ – Pahilo Page
३ असार २०७६, मंगलवार १८:२८ 909 पटक हेरिएको
मानव जीवनमा रोग र शोकबाट मुक्ति पाउन योग अभ्यास अनिवार्य भएको एक कार्यक्रमका बक्ताहरुले जोड दिएका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ र ७ को गैराखाली हरियाली सामुदायीक बनको भवनमा सञ्चालित योग शिविरको मंगलबार भएको समापन कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले शरिर र मनलाई स्वथ्य राख्नकालागि दैनिक योग अभ्यास गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
कार्यक्रमका बक्ताहरुले पछिल्लो समय विभिन्न कारण मानिस शारिरिक र मानसीक रुपमा अस्वथ्य हुँदै गएकाले पनि योग अध्यास अनिवार्य भएको बताए । उनीहरुले योग कुनै धर्मसंग भन्दा पनि विज्ञान संग सम्बन्धीत भएकाले यसको दायरा फराकिलो भएको स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा पतञ्जली योग समिति प्रदेश ५ का प्रभारी प्रेम शाहले गाउँ गाउँमा योग चेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि शाहले क्षमता वृद्धि, लक्ष प्राप्ति, मन शान्ति र स्वथ्य जीवनकालायि योग अनिवार्य छ भने ।
गैराखाली सामुदायीक बनका अध्यक्ष नोखी रावतको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पतञ्जलि योम समिति ५ नं. प्रदेशका महासचिव घनश्याम अधिकारी, बरिष्ठ योग प्रशिक्षक तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ का अध्यक्ष टोप बहादुर केसी लगायतले मावन स्वास्थ्यकालागि योगका बिषयमा धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रमको सञ्चालन पतञ्जली योग समितिका वडा सहसंयोजक दुर्गा प्रसाद भण्डारीले गरेका थिए । जेठ २९ गते देखि सञ्चालित शिविरको मंगलबार समापन गरिएको हो । समापनका अवसरमा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई सम्मान गरिएको योग शिक्षक सन्तोष भण्डारीले जानकारी दिएका छन् ।।